WAR DEG DEG AH-Wasiiradii Cusbaa oo Saaka Ku Sii Qulqulaya Madaxtooyada Puntland & Dhaarin Ka Socota.
Puntlandnews.net (Garoowe)-War deg deg ah oo hadda naga soo gaarey aqalka madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe ayaa sheegaya in ay halkaasi gaareen xubnihii cusbaa ee golaha wasiirada dowladda Puntland.
Xubnaha cusub ee golaha wasiirada Puntland ayaa aqalka madaxtooyada gaar ahaan xafiiska madaxweynaha waxaa koox koox ugu dhaarin doona gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda Puntland.
Waxaa hadda aqalka madaxtooyada ku sugan bahda saxaafadda Puntland oo qaadanaya doorkooda tebinta wararka la xiriira dhaarinta xukuumadda cusub ee uu habeen kahor soo magacaabay madaxweyne Siciid Denni.
Dhaarinta kadib ayaa waxaa wasiirada cusub madaxweyne Denni horgeyn doonaa barlamaanka cusub ee dowladda Puntland si uu ugu waydiiyo inay siiyaan codka kalsoonida si ay u gutaan waajibaadkooda.
Xukuumadan aad ayaa looga niyadjabsan yahay, doorashadii deni laguma farxin, xakuumada uusoo dhisayna laguma farxin, weligay masuul labadan arimood isu raaceen ma aan arag, ilaahay khayr baan ka barinay.
BKU hooyaday maxaa ku garsiiyey, fikirkayga iyo khibradayda ayaan ka hadlay. Hadiise aadan aqoon sida aragtiyaha laysu dhaafsado maa iska aamustid. Anigu ilaah ayaan baryaa, hadii adigu aad hooyadaa baridid waa hawl kuu taal.
hooyadaa was Toog Toog dalay
saxiib waad walantahay
BKU ha caytamine dadka si fiican ula dood, ma dameero iyo daayeeraa lasoo kortay, barona sida soomaaliga loo qoro, sida fartaadu u qaldan tahay ayaa maskaxdaaduna u qaldan tahay. Maxaa telefoonkaaga meesha ugu soo qortay mise kuwa jirkooda ka ganacsadaa tahay. Ximaar waaxid…
Hooyaada baan wasayaa